China EIR SPC raive nebutiro raive nebutiro mugadziri uye mutengesi | Karlter
Embossed muRejista (EIR) Floor ine Realfeel Technology
1. Anti-slip, Anti-mildew, High grade anti-abrasion uye anti-bhakitiriya
2. Kutora ruzha uye kudzikisira ruzha
3. Yakakwira-simbi, yakanyanya-chengetedzo
4. Nyore kuisa
5. Mari yekugadzirisa yakaderera, hapana-wakisi inodiwa
6. Yakareba Hupenyu
Zita Vinyl uriri (EIR SPC flooring)
Ruvara wenguva dzose ruvara kana semasampuli ako
Kukora kwebhodhi 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6mm kana yakagadzirirwa
Pfeka ukobvu hutete 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm senguva dzose
Pamusoro Dhizaini Ukanyatsotarisisa (Hard / Softwood) zviyo, machena, ibwe, kapeti.
Pamusoro Texture EIR
Pedza UV (Matt, Semi-Matt, Glossy)
Kuiswa Dzvanya system, (Unline / Valinge)
Lead nguva Mwedzi 1
Divi Inch mm
(Kana Yakagadzirirwa) 7 "* 48" 180 * 1220
Chii chinonzi EIR (Yakasimbiswa muRejista) pasi?
Kune akawanda mafloor sarudzo anowanikwa nhasi izvo zvinogona kuve zvakaoma kusarudza iyo yakakwana pasi peimba yako kana bhizinesi. Kufambira mberi kwetekinoroji kwakaita kuti zvikwanise kuve nepasi rine kutaridzika kwakanaka uye kunzwa kwehuni hwepanyama - asi zvirinani. EIR Vinyl pasi inowedzera maitiro ako, asi iri nyore kugadzirisa, inogara kwenguva refu uye yakachengeteka kumhuri yako uye dzinovaraidza.
Kuziva zvishoma zvishoma pamusoro pemhando dzakasiyana dzepasi, magadzirirwo uye kusimba uye kushomeka kwemhando imwe neimwe zvinofanirwa kubatsira pakuita sarudzo. Mushure mezvose, kana iwe ukafunga kushandura iro kara rekamuri, kupenda kuri nyore nyore.
Yese Rigid Vinyl Flooring haina Kufanana!
Luxury vinyl flooring izita rakajairika iro rinogona kushandiswa kune zvese kubva zvakachipa, zvisina kuvakwa sheet sheet vinyl pasi kune realfeel, EIR tekinoroji yepamusoro-ye- iyo -line vinyl pasi.
Embossing inogona kuwedzerwa panguva yekupisa. Ndiro yesimbi ine pateni inomanikidzwa kupinda pamusoro pevhu, ichigadzira kutasva kwakafanana nezvikwiriso zviri mumatombo kana huni. Unyanzvi hunowedzerwa kune yakatsetseka foto fotera iyo inogona kana isingafananidze tsanga yemufananidzo wehuni chairo kana dombo.
Embossed In Register (EIR): Realfeel EIR pasi ndiyo yepamusoro-soro pasi - tariro yedhaimani yemhando yepamusoro vinyl pasi. Mavara acho anowirirana neyakafanana nehuni inoratidzwa mumutsara wemufananidzo.
Pashure: tinya kukiya vinyl pasi
Zvadaro: namatira pasi vinyl pasi
yakasununguka yakaisa vinyl pasi
2.0mm Glue Pasi
4.0mm5.0mm tinya vinyl
namatira pasi vinyl pasi